On jan 13, 2020 10 292
Naverina nanomboka androany, rehefa natsahatra, ny asan’ny polisy mpisava ny taratasy ny fiara eny an-dalàna( Police de la Route). Araka ny fanazavana nomen’ny Tale kabinetra ny filaminanana anatiny, Commissaire Divisionnaire Aina Nirina Albert Estel dia miavaka ny fomba fiasana manomboka izao » Nahazo fiofanana manokana avokoa ny polisy midina an-tsehatra. Hanana ny hampiavaka azy eo amin’ny ankanjo hanaovana. Manomboka anio ny eto an-drenivohitra, afaka herinandro dia hiatrika ny fiofanana ihany koa ny polisy any amin’ny faritra hafa. Aorian’izay hiasa avy hatrany izy ireo », hoy hatrany ity tomponandraikitra ity.
Momba ny taratasin-tsazy ( contravention) dia hiova tanteraka ihany koa izany. Ny trano fanotana boky an’ny fanjakana na ny » Imprimerie nationale » no miandraikitra izany. Afaka telo volana dia hiparitaka manerana ny nosy izany. » Mialoha izay anefa, misy ihany ny taratasin-tsazy efa nomanin’ny Minisiteran’ny filaminana anatiny. azo ampiasaina tsara izy ireo ary tsy azo hatao hosoka. Voafetra ihany koa ny isa aty am-piandohana ka 1000 isakin’ny roa herinandro no havoaka. », hoy hatrany ny kaomisera Aina Nirina Albert Estel.
Ankoatra izay, hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny kaominina momba ny fampiasana ny fitaovana fingiazana ny fiarea mijanona tsy ara-dalana eny amoron-dalana. » Hisy koa ny fiaraha-miasa amin’ny Tafika Malagasy, mba ahazoana fiara lehibe, afaka mibata ny fiara mijanona amoron-dalàna rehetra. Manomboka izao dia tsy tokony hisy intsony ny fiara eny amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra. », hoy ity manamboninahitra polisy ity namarana ny resaka.
Marihina fa ankoatra asan’ny polisy, misy ny takelam-by ahitana soratra fanentanana sy laharan’ny finday ahafahana miantso ny polisy.
Hiverina ihany koa ny laharana maintso, ahafahana miantso maimaim-poana 117.
EURO 2020: TOUS LES MATCHS EN DIRECT SUR STARTIMES